बाजुरामा विकास आउँछ: उद्योगमन्त्री थापा - Himalkhabar.com
अन्तर्वार्ता/विचारशुक्रबार, फाल्गुण २३, २०७०
बाजुरामा विकास आउँछ: उद्योगमन्त्री थापा
एमालेकातर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदमध्ये सबैभन्दा बढी (२२,४८५) मत पाएका कर्णबहादुर थापा (४५) सुदूरपश्चिमको विकासका लागि नयाँ नीतिको तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन् ।
बाजुराको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री बन्नु भएको छ, स्थानीय जनताका अपेक्षा कति हदसम्म पूरा होलान ?
हो, मुलुककै सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्रले लामो समयपछि सरकारमा प्रतिनिधित्व पाएपछि जनतामा अपेक्षा बढेको छ, जुन स्वभाविक पनि हो । सबै समस्या एकैपटक समाधान भइहाल्छन् भन्ने होइन तर, मलाई आफ्नो जिम्मेवारीबोध छ, कम्तीमा पनि बाजुराबासीलाई निराश हुन दिन्न ।
अभाव र समस्याको ठूलो चाङबाट बाजुराबासीलाई कसरी पार लगाउनु हुन्छ ?
पिछडिएको भए पनि बाजुरा ठूलो सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । ती सम्भावनाबाटै हो निकास खोज्ने । त्यहाँ खनिज र जडिबुटीको ठूलो सम्भावना छ । खनिज सम्पदाको खोज र उत्खनन गराउने मेरो योजना छ । जडीबुटी उद्योग र लघु उद्योगका सम्भावनाहरु पनि प्रशस्तै छन् । यिनै विषयहरुमा केन्द्रित रहेर योजनावद्ध हिसाबले अघि बढ्ने सोच बनाएको छु ।
बाजुरा लगायत सुदूरपश्चिमलाई राज्यले उपेक्षा गरेको आरोप लाग्ने गर्छ, अब राज्यको हेराईमा परिवर्तन आउला ?
राज्यबाट कम बजेट वितरण भयो भन्नु स्वभाविक हो । तर, अहिलेको ठूलो समस्या भनेकै नीतिको अभाव हो । बाजुरा र समग्र सुदूरपश्चिमको विकासका लागि अहिलेसम्म ठोस नीति नै बन्न सकेको छैन । व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराएर लाभ हुन्छ भन्ने चिन्तनबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । विकासका निम्ति सुहाउँदो नीति र कार्यान्वयन गर्नेमा प्रतिवद्धता भए व्यक्ति ठूलो कुरा होइन ।
सुदूरपश्चिम अब सधैँ पछि रहन्न ।
सुदूरपश्चिम आयोग पनि गठन भयो तर केही प्रगति भएन ?
आयोग गठन गर्दाको सोच ठिकै हो , तर त्यसको संरचना सही ढंगले काम गर्न सक्ने प्रकारको छैन । त्यहाँको भावना र मुद्दालाई सम्बोधन गर्नसक्ने खालको छैन । त्यस अनुरुपको काम गर्ने क्षमताका मान्छे त्यहाँ छैनन् । त्यसैले सुदूरपश्चिको भावना, मुद्दा र समग्र नौ वटै जिल्लालाई समेट्ने गरी आयोगको पुनर्गठन गरिनु आवश्यक छ । जस्कालागि मैले प्रयास गर्दैछु ।
उद्योगमन्त्रीका हैसियतमा अहिले तपाइँका प्राथमिकता के के हुन् ?
नेपालमा औद्योगिक–व्यवसायिक विकास नभई रोजगारी सिर्जना हुँदैन र रोजगारी विना जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिंदैन । आर्थिक विकासको मुख्य आधार नै अ‍ैद्योगिक क्षेत्र हो । नेपालमा उद्योग स्थापनाका सम्भाव्यताहरूको अध्ययन गरी उद्योगहरू स्थापना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवाहरूलाई व्यवसायिकता र औद्योगिक क्षेत्रतर्फ आकर्षित गराउने, विदेशी लगानी बढाउने, राष्ट्रिय उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने जस्ता कार्यहरू मेरा प्राथमिकतामा पर्छन् ।
प्रस्तुतीः कपिल भट्ट